Data wareejinta dhexeeya laba qalabka noqon kartaa in ay daadsanaanta dhabta ah. Tani waa sababta dadka isticmaala inta badan isku dayaan oo ay ka fogaato waxaa sida ugu badan ee suurtagal ah. Haddii aad rabtid inaad ku wareejiso xogta u dhexeeya Nexus Google iyo qalab kale android, si kastaba ha ahaatee, maqaal ku Hanuunin Dadka Arrinta aad qaadataa nidaamka.
Sida Google Nexus laftiisa waa aalad android, habka wareejinta qaban karin halkii ay si fudud. Ka dib maqaal uu sharaxayaa kasta iyo talaabo kasta oo suuqa kala iibsiga xogta si faahfaahsan. Si aad u bilaabaan, raac tallaabooyinkan:
Si aad u wareejin Photos iyo Videos
1. Tag app Google+ ku saabsan Google Nexus. Tubada icon ah oo leh saddex dhibcood xaq u socda in farriimaha 'icon iyo dhibic ka hoos menu, dooro "Settings".
2. Laga shaashadda in fureysaa, tuubada on "kaabta Auto".
3. Slide badhanka ku yaal dhinaca midig ee ugu sareysa si ay awood Auto gurmad. Dib u fadhiiso oo dejiso halka xogta aad ayaa uploaded in aad xisaabta Google.
Marka gurmad ah waa dhameystiran yahay, oo dhan sawiro iyo videos noqon doonaa in aad xisaabta Google. Waxaad u baahan tahay oo kaliya in uu saxiixo in si qalab Android adiga oo isticmaalaya xisaab ay isku Google oo waxaad awoodi doontaa inaad si ay u helaan oo dhan sawiro iyo videos kuwa.
Si ay u gudbiyaan Xiriirada & Calendar
The xiriirada ku saabsan Google Nexus la synced doonaa in aad Gmail account by default. Waxaad u baahan doontaa kaliya inay la soo wareegto in qalab cusub Android oo isticmaalaya xisaab isla Google si ay u helaan, kuwaas oo dhan xiriirada synced in aad qalab cusub Android.
Sidoo kale, sida Google Nexus waa aalad Android, kalandarka doonaa mar hore la synced in aad xisaabta Google. Marka aad login doonaan in qalab cusub oo isticmaalaya xisaab isla Google, waxa aad heli doontaa dib.
Si ay u gudbiyaan Messages
Haddii aad la isticmaalayo "tagi", app Fariin by Gmail ka, uma baahnid inaad wax laga walwalo fariimaha. Marka aad soo gasho si aad qalab Android cusub oo isticmaalaya xisaab Gmail in aad isticmaaleysay on Nexus Google ka, si toos ah dib ugu soo laabtay qalab Android aad waxaad heli doontaa fariimaha aad.
Hadda habkan sida muuqata waa mid aad u fudud. Dhammaan xogta adiga waa iska diyaar ah inaad, oo aad u baahan tahay inaad samayso waa saxiixo in qalab cusub android la xisaab Gmail in uu leeyahay xogta oo dhan taas aawadeed. Laakiin waxaa laga yaabaa inaad haysan ogeysiisyada in habkan uusan jid ha u fikirin oo macneheedu yahay taas oo aad qalab cusub Android wareejin karaan barnaamijyadooda ama music aad tusaale ahaan in.
Wondershare MobileTrans Waa xal hal-click dhammaan xogta aad dhibaato wareejinta ah. Waxaa lagala soo bixi karaa http://www.wondershare.com/phone-transfer/ wuxuuna ku qoran yahay laba qeybood oo. Version maxkamad ayaa la isticmaali karaa 30 maalmood oo lacag la'aan ah oo ah qiimaha. Version premium waxaa lagu iibsan karaa $19.95 oo kaliya ruqsad la isticmaalo hal mar. Wondershare MobileTrans Qaadataa daryeelka habka wareejinta oo dhan keligeed oo kaliya u baahan tahay user ay u guji ah badhamada yar. Waxay hubisaa dhamaystiran ammaanka xogta iyo xitaa kuu ogolaanaysaa inaad sii barnaamijyadooda iyo fariimaha ka phone jir. Waxa ay taageertaa kala duwan ee qalabka Android Sidaa darteed, waxaa jira arrin waafaqsan lahayn. Wondershare MobileTrans Waa la jaan qaada labada Windows iyo OS MAC.
Si aad u wareejin files isticmaalaya Wondershare MobileTrans, qaabkan soo socda:
1. Download Wondershare MobileGo ka http://www.wondershare.com/phone-transfer/ . Sug download si ay u buuxiso ka dibna ku xidh si aad laptop ama computer.
2. Isku Nexus Google iyo telefoonka cusub Android in aad laptop la orodka Wondershare MobileTrans. Waxaa lagu ogaan doonaa qalab aad si toos ah oo aad ka heli doonaa shaashadda sida hoos ku muujisan.
3. Isticmaal menu ee xarunta si loo doorto waxyaabaha in aad rabto in lagu wareejiyo. Marka aad samaysay. Hit "Start Copy". Menu A muuqan doonaa iyadoo la isticmaalayo oo aad u helida horumarka kala iibsiga.
Marka iibsiga dhamaato, waxaad awoodi doontaa inaad si ay u helaan dhammaan xogta ka Nexus google in aad telefoon cusub Android.
Fiiro u yeelo in halka habkan ma aha oo kaliya fudud si ay u fuliyaan laakiin waxa ay sidoo kale awood u aad si ay u gudbiyaan dhammaan xogta ka Google Nexus ay ka mid yihiin jadwalka, music iyo xitaa barnaamijyadooda.
1. Ha u ogolaan mid ka mid ah qalabka ay uga jari lahaayeen computer ama laptop inta ay socoto wareejinta. Tani waxay keeni kartaa in khasaaraha ama musuq-maasuq ee xogta.
2. Waxa aad joojin kartaa habka waqti kasta adiga oo isticmaalaya "Cancel" button yaal dhinaca midigta hoose ee suuqa kala iibsiga.
3. Ogeysiiska "Flip" Button shaashadda ugu weyn. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad ku dhajisan il iyo caga qalabka. Tusaale ahaan, haddii aad ku dhajisan ay hindiseen, waxaad awoodi doontaa in aad xogta ka soo diri aad android cusub si aad Google Nexus.
Waa kuwee Android qalab aad hadda isticmaashid? Codeeyaan qalab aad iyo aad nooga caawiso go'aan kuwaas oo qalab ugu cadcad buuxda!
9. HTC Mid ka mid ah Mini 2
10. HTC Mid ka mid ah M8
> Resource > Android > Sidee si ay u gudbiyaan Xogta laga Google Nexus in Android